Indlu esemahlathini ebonakala kakuhle kuMlambo omhle iBukhan (Indawo Yokuhlala ye-Ipple) - I-Airbnb
Indlu esemahlathini ebonakala kakuhle kuMlambo omhle iBukhan (Indawo Yokuhlala ye-Ipple)
Hwado-eup, Namyangju-si, Gyeonggi Province, South Korea
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguSoonie And Hyeong
USoonie And Hyeong ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Xa ufuna ukuphumla kubomi bakho obunzima kunye
ungabona umlambo iBukhan ubuka ubuhle bayo.
Ekuseni, unokuvusa isandi
seentaka ezixakekileyo, fumana isidlo sakusasa kunye
nokuphuma kwelanga loMlambo waseMntla Korea, uze wenze enye inkumbulo.
Siza kukwenza ube yikhoma.
1. Umbono wePanoramic 360-degree yaseBukhangang ukusuka encotsheni yentaba ephakamileyo
Yindlu eyakhiwe kwintaba ephakamileyo ejongene noMlambo waseBukhan. Ke ngoko, unokuyonwabela umlambo ocwengileyo, iinduli zeentaba kunye nesibhakabhaka esiluhlaza esikhokelela ngaphezu kwayo ngokukrwaqula ngelixa uhlala kwaye ubuya.
Emva kwendlu eyakhiwe entabeni, yindawo epholileyo kwaye epholileyo ejikelezwe yimithi enevumba letyholo lendalo.
Ngemini epholileyo, jonga phezulu esibhakabhakeni ebusuku. Iya kuzaliswa kukukhanya kweenkwenkwezi nenyanga.
Ukuba yimini enamafu, ndiza kusebenzisa isibhakabhaka njengencwadi yokuzoba ukupeyinta phezu kwamafu.
Ukuba uvuka ekuseni, uya kukwazi ukubona ilanga liphuma esibhakabhakeni esizaliswe ziintaba eziphezu komhlaba.
2. Kwaye ukongeza kule nto, igadi encinci
Thatha uhambo ngaphandle kwendlu kwaye ujonge igadi eluhlaza eluhlaza yeentyatyambo ezimibalabala ezikhuliswe ngumamkeli!
Kumhlaba apho kuqeshwa khona indlu, umamkeli-zindwendwe akenzi mgudu ungako wokutyala nokunyamekela iintyatyambo ezimibalabala. Ngeengcamango ezinzima, kutheni ungacimi ukutshintshwa kwexesha elithile, usebenze imizwa emihlanu kumagqabi kunye nephunga leentyatyambo, kwaye ubethe iintyatyambo.
Ngexesha elibandayo, xa iintyatyambo zisithi ndlela-ntle okwexeshana, amasebe namagqabi ajike abemdaka kunye nomoya obandayo adibana ndawonye ukuze anike inkangeleko ekhethekileyo kunye nevumba elivela ekupheleni kwexesha lonyaka.
I , ekwimizuzu engama-20 ukusuka ehotele, yindawo enomtsalane kubakhenkethi eNamyangju, apho iintyatyambo zitshintsha ngexesha ngalinye lonyaka. Ikwayindawo ethandwayo yokufumana iifoto ezintle zokuphuma kwelanga kunye neepoppies, kwaye ikwayindawo entle ukonwabela ukukhwela.
Iibhloko ezilithoba yicafe ebekwe emazantsi oMlambo iBukhan, imizuzu eyi-15 kude nehotele. Yindawo yenkcubeko entsonkothileyo apho unokuyonwabela ikofu entsha eyenziwe ngabadidiyeli be-Q kunye ne-baristas yobuchwephesha, kunye neemenyu ezahlukeneyo zokubhaka kunye ne-brunch. 'Idriphu yesandla' enencasa ezahlukeneyo kunye nevumba lembotyi nganye kunye nesonka esitshintsha kancinane ngexesha lonyaka ngalinye zizinto zemenyu ezidumileyo. Unokonwabela imbono eyahlukileyo kancinane yoMlambo waseBukhan ukusuka kumgangatho wesibini nangaphandle.
Imyuziyam yaseSeoho yoBugcisa yindawo yomboniso entsonkothileyo yenkcubeko evulwe kwiindonga zoMlambo waseMantla eNamyangju, eGyeonggi-do. Ukususela ekuvulweni kwayo, iikonsathi ezintsha kunye nemiboniso ziye zabanjwa kwindawo yomboniso ejongene noMlambo waseBukhan, indawo yokutyela, kunye nendawo yengca yangaphandle emalunga ne-500 pyeong. Imiboniso eyahlukeneyo engabotshwanga yifom okanye uhlobo ibonelela abatyeleli ngolwazi olubanzi lwenkcubeko.
Sinikeza indawo entsha apho unokufumana surf ngaphakathi, lokuphola amanzi, ukwenyuka, kunye LOKUTYA & Bar nabantu abaninzi ngexesha elinye. Yenza iinkumbulo. I-surfing yangaphakathi enokufikelelwa ngokulula ngabantwana kunye nabaqalayo ngaphandle kwamaza kunye nemozulu! I-WAVESURF ivula iintsuku ezingama-365 ngonyaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Soonie And Hyeong
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hwado-eup, Namyangju-si